I-China Customs Union- EAC, i-GOST-R Inkonzo kunye noVavanyo |MCM
▍Yintoni iGOST-R Declaration?
I-GOST-R i-Declaration of Conformity luxwebhu lwesibhengezo sokuqinisekisa ukuba iimpahla zihambelana nemigaqo yokhuseleko lwaseRashiya.Xa uMthetho weMveliso kunye neNkonzo yeSiqinisekiso wakhutshwa yiRussian Federation ngo-1995, inkqubo yoqinisekiso lwemveliso esisinyanzelo yaqala ukusebenza eRashiya.Ifuna zonke iimveliso ezithengiswa kwimarike yaseRashiya ukuba ziprintwe nge-GOST enyanzelekileyo yokuqinisekisa uphawu.
Njengenye yeendlela zokuqinisekisa ukuthotyelwa okunyanzelekileyo, i-Gost-R Declaration of Conformity isekelwe kwiingxelo zokuhlolwa okanye ukuqinisekiswa kwenkqubo yokulawula umgangatho.Ukongeza, i-Declaration of Conformity inophawu lokuba inokukhutshwa kuphela kwiqumrhu elisemthethweni laseRashiya elithetha ukuba umfaki-sicelo (umnini) wesatifikethi unokuba yinkampani yaseRashiya ebhaliswe ngokusemthethweni okanye iofisi yangaphandle ebhaliswe eRashiya.
▍IGOST-R Uhlobo lwesiBhengezo kunye nokuSetyenzwa
Isatifikethi sokuthumela ngenqanawa esinye sisebenza kuphela kwibhetshi ekhankanyiweyo, imveliso echaziweyo echazwe kwikhontrakthi.Ulwazi oluthile luphantsi kolawulo olungqongqo, olufana negama lento, ubuninzi, inkcazo, isivumelwano kunye nomxhasi waseRashiya.
2.Ceqinisekisiweyoe ngobunyani beUnyaka omnye
Nje ukuba imveliso inikwe isatifikethi, abavelisi banokuthumela iimveliso eRussia ngaphakathi konyaka omnye ngaphandle komda wamaxesha okuthumela kunye nobungakanani kumxumi othile.
3. Ceqinisekisiweyo ngokunyaniseka kweiminyaka emithathu/mihlanu
Nje ukuba imveliso inikwe isatifikethi, abavelisi banokuthumela iimveliso eRashiya phakathi kweminyaka emi-3 okanye emi-5 ngaphandle komda wamaxesha okuthumela kunye nobungakanani kumxumi othile.
● I-MCM ineqela leenjineli zokufunda imimiselo yaseRashiya yamva nje, iqinisekisa ukuba iindaba zamva nje zesatifikethi se-GOST-R zingabiwa ngokuchanekileyo nangexesha kubathengi.
●I-MCM yakha intsebenziswano esondeleleneyo nombutho wezatifikethi wokuqala owasekwayo, ibonelela ngenkonzo yoqinisekiso oluzinzileyo nesebenzayo kubathengi.
Ngoku kaTheIikhrayitheriya ezifanelekileyo ezifanelekileyo kunye neMithetho yeMithetho yezoBugcisa eKazakhstan, eBelarus naseRussian Federationnto leyo isivumelwano esayinwe yiRashiya, Belarus kunye Kazakhstan ngo-Oktobha 18 2010, iKomiti Union Customs uya kuzinikela ekuqulunqeni umgangatho ofanayo kunye nemfuneko ukuqinisekisa ukhuseleko imveliso.Isiqinisekiso esinye sisebenza kumazwe amathathu, esenza iRussia-Belarus-Kazakhstan CU-TR isatifikethi esinophawu olufanayo lwe-EAC.Ummiselo uqale ukusebenza ngokuthe ngcembe ukusuka nge-15 kaFebruwarith2013. NgoJanuwari 2015, iArmenia neKyrgyzstan zajoyina iCustoms Union.
▍Udidi lwesatifikethi seCU-TR kunye nokuSebenza
Isatifikethi sokuthumela ngenqanawa esinye sisebenza kuphela kwibhetshi ekhankanyiweyo, imveliso echaziweyo echazwe kwikhontrakthi.Ulwazi oluthile luphantsi kolawulo olungqongqo, olufana negama lezinto, ubuninzi, inkontileka yenkcazo kunye nomxhasi waseRashiya.Xa ufaka isicelo sesatifikethi, akukho zisampuli zicelwayo ukuba zinike kodwa amaxwebhu kunye nolwazi luyafuneka.
Nje ukuba imveliso inikwe isatifikethi, abavelisi banokuthumela iimveliso eRashiya ngaphakathi konyaka omnye ngaphandle komda wamaxesha okuthumela kunye nobungakanani.
Isatifikethi esinesiqinisekiso seNtathuunyakas
Nje ukuba imveliso inikwe isatifikethi, abavelisi banokuthumela iimveliso eRussia phakathi kweminyaka emi-3 ngaphandle komda wamaxesha okuthunyelwa kunye nobungakanani.
Isatifikethi esisemthethweni seminyaka emihlanu
Nje ukuba imveliso inikwe isatifikethi, abavelisi banokuthumela iimveliso eRussia phakathi kweminyaka emi-5 ngaphandle komda wamaxesha okuthumela kunye nobungakanani.
● I-MCM ineqela leenjineli eziqeqeshiweyo zokufunda imibutho yabathengi yemigaqo yamva nje yezatifikethi, kunye nokubonelela ngenkonzo yokulandelela iiprojekthi ezikufutshane, ukuqinisekisa ukuba imveliso yabathengi ingena kwingingqi ngokutyibilikayo nangempumelelo.
● Ubutyebi obuninzi obuqokelelwe kushishino lweebhetri zenza ukuba i-MCM ibonelele ngenkonzo esebenzayo neyindleko eziphantsi kumxhasi.
● I-MCM yakha intsebenziswano esondeleyo kunye nemibutho yendawo efanelekileyo, iqinisekisa ukuba ulwazi lwamva nje lwesatifikethi se-CU-TR lwabelwana ngokuchanekileyo nangexesha kunye nabaxhasi.
Ngaphambili: Ixabiso leSatifikethi seBattery yaseTaiwan yeBsmi-iTaiwan-BSMI-MCM
Okulandelayo: eMelika, eKhanada- cTUVus&ETL
Isatifikethi sikaGost R
Gost R isatifikethi
Gost R Certification Ixabiso
Inkqubo yeSiqinisekiso seGost R
Inkonzo yeSiqinisekiso seGost R
Gost R Ixesha lokukhokela
Gost R quote
Gost R Ingxelo
Gost R imfuneko
Gost R Iinkcukacha
Gost R Amaxwebhu Technical
Gost R iMfuneko yoBugcisa
Lundwendwe R Uvavanyo
Izinto zoVavanyo lweeNdwendwe R
Gost R Test Indlela
Ingxelo yoVavanyo lweGost R
UVavanyo lweNdwendwe R
Gost R Testing Ixabiso
Inkonzo yoVavanyo lweGost R
Gost R Testing Ixesha
UGost R Tr